Sida loo sameeyo qaboojiye hawo adag oo guriga lagu carfiyo | Bezzia
Sida loo sameeyo qaboojiye hawo adag oo guriga lagu carfiyo
Toñy Torres | 09/10/2021 16:00 | Samee naftaada, Guriga
Samaynta hawo -qaboojiye adag oo guriga lagu carfiyo ayaa aad uga dhaqso badan uguna sahlan sida ay u muuqato. Sidaas oo kale waxaad gurigaaga ku carfin kartaa urka aad ugu jeceshahay, iyada oo aan loo baahnayn in la isticmaalo alaabta kiimikada oo aan aad loo ixtiraamin deegaanka. Smell Having smell smell smell smell smell smell smell smell smell smell smell smell smell smell smell essential essential essential essential essential essential essential essential essential essential essential essential essential essential essential essential essential essential essential essential essential Waa lagama maarmaan si aad ugu raaxaysato dareenka fayoobaanta guriga nadiifta ah oo hagaagsan.
Si taas loo gaaro waxaa jira xeelado badan oo guriga lagu sameeyo, sida yeelashada ubaxyo cusub, qaboojiye dabiici ah oo dabiici ah qol kasta, bacaha maro leh ubaxyo qalalan oo loogu talagalay armaajooyinka, iyo xulashooyin kale oo badan. Sida fikraddan si aad u abuurto hawo -qaboojiye adag oo aad u isticmaali karto labadaba si aad guriga ugu carfiso, sida khaanadaha ama armaajooyinka gudaha. Sababtoo ah ma jirto wax ka xun dhar qaali ah laakiin leh ur xun.
1 Hawo -qaboojiye adag, sidee loo sameeyaa?
1.1 Iyada oo wax qudaar ah
1.2 Sida loo sameeyo qaboojiye hawo adag leh jelly
Hawo -qaboojiye adag, sidee loo sameeyaa?
Freshener-ka hawada adag ma aha wax ka badan nooc saabuun qadiimiga ah, kaliya halkii loo isticmaali lahaa in lagu dhaqo dharka, waxaa loo isticmaalaa udugga guriga ama armaajooyinka. Si aad u abuurto saabuunyadan urka leh ama hawo -mareenka adag, waxaad u baahan doontaa suuf qudaar ah si aad u abuurto maaddada adag. In kasta oo ay jirto ikhtiyaar kale oo xitaa ka sahlan, dhaqso badan oo ka jaban, gelatin. Halkan waxaan ku tuseynaa sida loo sameeyo qaboojiye hawo adag labada dhinacba, si aad iskugu daydo oo aad u samaysato hal -abuurkaaga aad ku carfiso gurigaaga.
Iyada oo wax qudaar ah
Si aad u abuurto hawo -qaboojiye adag oo guriga lagu sameeyo waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho wax -soo -saarka soy, taas oo ah, waa wax soo saar marka lagu daro gacan -ku -samaynta, waa vegan. Marka laga hadlayo maaddada loo isticmaalo in lagu gaaro cadarka, waxaad dooran kartaa saliidda lagama maarmaanka ah taas oo haddii xaddiga la isticmaalayo uu noqon doono 5% xaddiga marka loo eego dhuunta. Haddii aad rabto inaad isticmaasho saliid botanical, boqolleyda ayaa noqon doonta 10% marka loo eego xaddiga wax -soo -saarka khudradda la isticmaalo. Kuwani waa agabyada aad u baahan doonto abuuro hawo-qaboojiye qudaar ku dhisan oo macmal ah.
100 gr of wax soy
saliid muhiim ah ama dhirta aad dooratay
Habsocodku waa mid aad u fudud mana qaadan doono wax ka badan 30 daqiiqo. Furaha ayaa ah in la dhalaaliyo wax -soo -saarka soyka, oo ah hab ay tahay in lagu sameeyo kulayl hoose. Markii shamacii si buuxda loo dhalaaliyo, waxaan ku darnaa qadarka lagama maarmaanka u ah udugga la doortay. Xusuusnow, haddii aad isticmaasho saliid lagama maarmaan ah waa inaad ku dartaa 5% oo haddii ay tahay saliid botanical qaddarku wuxuu noqon doonaa 10% marka la barbar dhigo 100gr oo wax soy ah ah.
Ku walaaq qaaddo alwaax ah oo si fiican isku walaaq. Marka xigta, ku shub isku dar ah caaryada silikoon. Waa muhiim inay ka samaysan yihiin maaddadan si kiniinnada qaboojiyaha hawada si fudud looga saaro caaryada. Haddii aad rabto inaad qurxiso hawo -qaboojiyahaaga adag, kaliya waa inaad ku dartaa dhowr caleemo potpourri, caleemo qalalan, qorfe qorfe ama diirka liinta. U ogolow isku darku inuu qaboojiyo oo si buuxda u adkeeyo Kahor intaadan wax ka beddelin oo aan voila, waxaad hore u haysatay xoogaa hawo -qaboojiye oo macmal ah oo guriga lagu sameeyo oo gurigaaga lagu carfiyo.
Sida loo sameeyo qaboojiye hawo adag leh jelly
Ikhtiyaarkan kale ayaa u fudud sida kii hore talaabooyinkuna aad bay isugu eg yihiin. Farqiga ayaa ah in maaddada loo isticmaalo in lagu helo arrin adag ay tahay gelatin. Geedi socodku waa kan soo socda, marka hore waa inaan karnaa koob biyo ah, oo leh baqshad gelatin dhexdhexaad ah iyo afar qaado oo cusbo ah. Marka isku darka uu karkarayo, ka qaad dabka kuna dar koob biyo qabow.
Wakhtigan waxaan ku dari doonaa cadarkii la doortay, waxaan u baahan doonnaa ilaa 10 ama 15 dhibcood oo saliid lagama maarmaan ah. Oo si hawo -qaboojiyaha hawada adag uu waliba u yeesho midab fiican, waxaan ku dari doonaa dhowr dhibcood oo midabaynta cuntada ah. Ku shub isku dar ah weelasha galaaska, sida dhalooyinka caano fadhi, dhalooyinka yar yar, ama weel kasta oo galaas ah oo aad guriga ku haysato. Marka isku darka la qaboojiyo, gelatin wuxuu noqon doonaa mid adag waxaadna yeelan doontaa hawo -qaboojiye hawo oo ku habboon oo aad dhigto musqulaha ama geesaha yaryar ee gurigaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Sida loo sameeyo qaboojiye hawo adag oo guriga lagu carfiyo
4 jimicsi lug ah oo lagu sameeyo guriga
Faa’iidooyinka waaweyn ee laga helo cunista mooska